သူမရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားနဲ့ ပက်သက်ပြီး Public မှာဝေဖန်နေတဲ့သူတွေကို ကိုယ့်စိတ်ဓာတ်ကိုသိကြဖို့ ပြောလိုက်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု – Cele Snap
အနေအေးပေမယ့် စိတ်ထဲရှိသလို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုတတ်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ ဒီကနေ့မှာလည်း သူမကို Publicမှာ Body shaming လုပ်တဲ့သူတွေကို ပြောလာပါတယ်။ ပိုင်ဖြိုးသုက “ကျယ်မဝလာတာကျယ်မသိတယ်နော်….😏 ကျယ်မချစ်ဖို့ကောင်းတာလည်း ကျယ်မကသိတယ်….😍 ကျယ်မကို”ဝပြဲကွဲနေတာပဲ”လို့ publicမှာbodyshamingလုပ်တဲ့အယ်မတို့ကရောကိုယ်စိတ်ပုပ်တာကိုယ်သိရဲ့လား???🤔🤔🤔 မသိဘူး ကျယ်မကဝလည်းချစ်စရာကောင်းတယ် 😇😉😁” ဆိုပြီး ပြောလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ သူမကို ဝတယ်ဆိုပြီး Publicမှာ Body shaming လုပ်တဲ့သူတွေကို ကိုယ့်စိတ်ဓာတ်ကိုယ်သိဖို့ပြောလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်ဖြိုးသုကို ချစ်ပြီးသားသူတွေကတော့ ပိုင်ဖြိုးသုတစ်ယောက် ဘယ်လိုခန္ဓာကိုယ်လေးပဲဖြစ်ဖြစ် ဆက်ချစ်ပေးနေကြဦးမှာဆိုတာ သေချာပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေး တစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
အနအေေးပမေယျ့ စိတျထဲရှိသလို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောဆိုတတျတဲ့ ပိုငျဖွိုးသုကတော့ ဒီကနမှေ့ာလညျး သူမကို Publicမှာ Body shaming လုပျတဲ့သူတှကေို ပွောလာပါတယျ။ ပိုငျဖွိုးသုက “ကယျြမဝလာတာကယျြမသိတယျနျော….😏 ကယျြမခဈြဖို့ကောငျးတာလညျး ကယျြမကသိတယျ….😍 ကယျြမကို”ဝပွဲကှဲနတောပဲ”လို့ publicမှာbodyshamingလုပျတဲ့အယျမတို့ကရောကိုယျစိတျပုပျတာကိုယျသိရဲ့လား???🤔🤔🤔 မသိဘူး ကယျြမကဝလညျးခဈြစရာကောငျးတယျ 😇😉😁” ဆိုပွီး ပွောလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ပိုငျဖွိုးသုကတော့ သူမကို ဝတယျဆိုပွီး Publicမှာ Body shaming လုပျတဲ့သူတှကေို ကိုယျ့စိတျဓာတျကိုယျသိဖို့ပွောလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပိုငျဖွိုးသုကို ခဈြပွီးသားသူတှကေတော့ ပိုငျဖွိုးသုတဈယောကျ ဘယျလိုခန်ဓာကိုယျလေးပဲဖွဈဖွဈ ဆကျခဈြပေးနကွေဦးမှာဆိုတာ သခြောပါတယျ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေး တဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။